I-Sagittarius constellation: izici, izinganekwane kanye nezintshisekelo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
I-Las izinkanyezi Ziyiqoqo lezinkanyezi esingazibona emhlabeni wethu futhi ezingafana nezibonakaliso ezahlukahlukene zezimpawu. Amagama amaningi anikezwa lezi zinkanyezi anencazelo nomsuka. Elinye lamaqembu abaluleke kakhulu ezinkanyezi yilelo lezinkanyezi. Namuhla sizokhuluma nge i-constellation sagittarius uyini umlaza wesishiyagalolunye weqembu lezinkanyezi futhi umelwe yi-centaur ephethe umnsalo ngesandla.
Kule ndatshana sizochaza zonke izici, imvelaphi nomlando we-constellation Sagittarius.
2 Izinkanyezi eziyinhloko ze-constellation Sagittarius
3 Izinganekwane nomlando we-constellation Sagittarius
4 Nebulae, ukufundwa kwezinkanyezi nabafokazi
Into yokuqala okufanele siyazi ukuthi ikuphi le nkanyezi. I-constellation Sagittarius yaziwa nangokuthi "umcibisheli." Itholakala eningizimu yezwe nangaphansi kwe-Equator. Kungabonakala kalula ngesikhathi sokwindla, ebusika nasentwasahlobo. Kodwa-ke, ayikwazi ukubonakala eningizimu yezwe ngesikhathi sasehlobo, njengoba ibonakala enyakatho Nenkabazwe. Singakuthola ncamashi phakathi kweqoqo lezinkanyezi iScorpio nomlaza iCapricorn.
Isici esiyinhloko sale nkanyezi ukuthi inesimo esifana ne-centaur nomnsalo esandleni sayo. Kukhona nabantu abammele ngeketela. Phakathi kwezinkanyezi ezakha iqembu elikhanya kakhulusithola i-X Sagittarii nenkanyezi uW Sagittarii. Enye yezinkanyezi nayo enayo ngaphakathi kweqembu yaziwa ngegama lePistol, ngoba inokukhanya okukhulu kunazo zonke izinkanyezi ezisemthaleni.
Esinye isici esimele i-constellation Sagittarius ukuthi sinamaplanethi angaphezulu.
Izinkanyezi eziyinhloko ze-constellation Sagittarius
Njengoba le nkanyezi yakhiwa ngomkhulu njengokubalulekile kwezinkanyezi, kuyadingeka ukugcizelela ezibaluleke kakhulu. Ake sibone ukuthi ziyini:
Isi-Nunki: Yinkanyezi enombala oluhlaza okotshani futhi itholakala ebangeni leminyaka ekhanyayo engama-210.
Polis: iyinkanyezi enezilinganiso ezinkulu ezihambisana nenye inkanyezi eqenjini B futhi enombala omhlophe okwesibhakabhaka.
I-Rukbat: Le nkanyezi itholakala kude kakhulu, cishe iminyaka engama-250 yokukhanya kusuka kusistimu yelanga futhi imhlophe.
Imidiya Kaus: Yinkanyezi enezilinganiso ezinkulu futhi itholakala eduze, kude ngeminyaka eyi-85. Yinkanyezi esawolintshi.
I-Arkab: kubuye kube yiminyaka eyi-85 elula, kepha kuyinkanyezi kanambambili. Lokhu kusho ukuthi kunezinkanyezi ezimbili koyedwa.
I-Alnasel: kubhekwa njengenkanyezi yeqembu lemidondoshiya. Ilanga singalibheka njengenkanyezi emaphakathi, ngakho-ke kufanele ucabange ubukhulu bale nkanyezi. Umbala wayo uphuzi futhi utholakala kude ngeminyaka eyi-125 yokukhanya.
Eta: Iphinde ibhekwe njengenkanyezi enkulu kodwa ibomvu. Iyizinkanyezi eziseduze kunazo zonke izinkanyezi kule nkanyezi, etholakala eminyakeni engu-70 yokukhanya kusuka kusistimu yelanga.
Izinganekwane nomlando we-constellation Sagittarius
Njengoba sibona kweminye imilaza, cishe bonke banomsuka ezinganekwaneni zamaGrikhi. Kulokhu, sithola i-constellation emele i-Chiron centaur. Imayelana nokuba yingxenye yendoda eyisiqingatha sehhashi. Lo muntu wasenganekwaneni wayeyindoda ehlakaniphile ehlonishwa kakhulu ngalo lonke ulwazi olunzulu ayenalo emhlabeni wezokwelapha. Umsuka wawo wavela esiphambanweni phakathi kweCronos ne-nymph Filira.
UChron walimala empini ngomcibisholo, kepha wayenombandela owodwa obalulekile: wayengumuntu ongafiyo. Lokhu kumenze ukuthi aqhubeke nokuhlupheka isikhathi eside kwazise ubengafi kodwa esalinyazwe umcibisholo. Usizi lwakhe lwalunzima kangangokuba ukuze azikhulule esiqalekisweni sakhe sokungafi, wanikeza uPrometheus ukungafi kwakhe. Ngale ndlela, wayehlose ukuphumula ingunaphakade. Ngenxa kaNkulunkulu uZeus, wakwazi ukuyibeka phakathi kwezinkanyezi ezinkulu esibhakabhakeni. Le ndlela besiyazi kanjani namuhla emqulwini weSagittarius.
Kule nkanyezi kunezinkanyezi eziningi ezilokothelanayo ngenxa yamandla adonsela phansi. Yile ndlela amaqembu amaqembu ama globular akhiwa ngayo. Izigidi zezinkanyezi ezindala kakhulu zihlanganisiwe kula maqoqo omhlaba. Kulinganiselwa ukuthi ezinye zalezi zinkanyezi zingaba zindala njengeminyaka eyizigidi eziyizinkulungwane ezi-1.000 noma ngaphezulu.. Kukhona futhi amaqoqo avulekile noma ama-galactic akhiwe ngezigidi zezinkanyezi ezincane ezineminyaka eyizigidi eziyi-100 kuphela ubudala.
Phakathi kwamaqoqo amakhulu we-globular esinawo enkanyezini yeSagittarius sineqoqo elikhulu le-Sagittarius neqoqo le-globular M55.
Nebulae, ukufundwa kwezinkanyezi nabafokazi
Njengoba sazi, i-nebulae yilezo zindawo ezisemthaleni lapho kwakhiwa khona izinkanyezi. Lezi zindawo zinezinto zamakhemikhali ezibalulekile i-hydrogen, i-helium nothuli lwe-cosmic. Lezi zindawo zilungele izinkanyezi ukuthi zenze ngenxa yokuncipha kwento. Ama-nebulae kule nkanyezi amaningi kakhulu futhi afaka iLagoon Nebula, iSagittarius Star Cloud ne-Omega Nebula.
Ngokuqondene nokufundwa kwezinkanyezi, yonke imilaza yezinkanyezi inezincazelo ezihlukile. Le nkanyezi yezinkanyezi iyisishiyagalolunye futhi iqoqwa yiplanethi iJupiter. Ekufundweni kwezinkanyezi uSagittarius unjalo uphawu olumele ukuhlakanipha, ngoba lufuna ukwazi umsuka nencazelo yazo zonke izinto ezikhona. Abantu abazalelwe ngaphansi kwalesi sibonakaliso bathanda ukuhamba futhi banothando lokwazi amanye amasiko emhlabeni jikelele. Bafuna okungokomoya futhi bangabantu abajabulayo nabathandanayo. Kodwa-ke, bangacindezeleka ngaphandle kwesizathu esibonakalayo.
Ekugcineni, ngo-1977 iplanethi yethu yathola isignali evela emkhathini. Kucatshangwa ukuthi kunemvelaphi engaphandle komhlaba. Kwafika kithi ngomlaza iSagittarius. Lo mlayezo wawuyindida impela futhi uqukethe uchungechunge lwezinombolo nezinhlamvu ezingakatholakali. Kunabantu abayikholwayo le ndaba nabanye abacabanga ukuthi ivela kwabezindaba.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngomlaza weSagittarius.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Umlaza weSagittarius